IKenya Visa | I-Kenya eVisa kwi-Intanethi | natvisa.com
Isicelo seKenya se-Visa kwi-Intanethi
I-eVisa yeentsuku ezingama-90 iyafumaneka yokungena eKenya njengokungena kunye, iTransuka, okanye i-visa ngoncedo. Injongo yokutyelela eKenya inokuba yeyezezeshishini, zokhenketho, okanye yezonyango. Bonke abemi bangaphandle abafuna ukuya eKenya banokufaka izicelo ze-Kenya visa online, ngaphandle kwabemi abaphuma kumazwe akhululwe. Iimfuneko zibandakanya itikiti lokuqhubela phambili, ubuncinci iphepha elingabhalwanga kwipaspoti yomenzi-sicelo ubuncinci kangangeenyanga ezintandathu. Emva kokugcwalisa isicelo se-Visa eKenya, umenzi-sicelo uya kufumana i-visa nge-imeyile. Kuya kufuneka uprinte i-e-Visa ukuze uyivelisele kwizibuko lokungena.
Abahambi abenza isicelo se-eVisa eKenya kufuneka bafake la maxwebhu alandelayo. La maxwebhu ngala: ikopi esencwadini yokundwendwela, ikopi efundwe kwiphepha lokugqibela le- ipaspoti, yomenzi-sicelo ifoto, I isiqinisekiso senqwelomoya amatikiti okufika nawokubuya. La maxwebhu kufuneka alayishwe ngelixa ufaka isicelo se-visa okanye kukho umngcipheko wokuba isicelo saliwe.
Ulwazi olunxulumene ne-visa luthunyelwa kwi-imeyile ye-imeyile enikezwe ngumenzi-sicelo. Nje ukuba isicelo siqhubekeke, i-visa ithunyelwa kwi-imeyile ye-imeyile. Ke ngoko, abafaki-zicelo kufuneka babonelele nge-imeyile esebenzayo abanokufikelela kuyo.
Wonke umhambi owenza isicelo se-eVisa kufuneka abe nepasipoti esemthethweni. Ipaspoti kufuneka isebenze ubuncinci iinyanga ezi-6 okanye nangaphezulu. Emva kokuba i-visa ifunyenwe, iindwendwe zivunyelwe ukungena kube kanye kwaye zihlala kweli lizwe ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-90 emva kokufika.
Elinye lamaxwebhu abalulekileyo ekufuneka umntu alayishe kunye nesicelo sevisa, bubungqina bendawo yokuhlala. Oku kunokuba ziinkcukacha zokubhukisha zehotele, ihotele kunye neehotele okanye nayiphi na enye indawo umhambi akhethe ukuhlala kuyo.
Yavunywa iKenya Visa
Ukuze ungene eKenya ngaphandle kwe-hassles, qiniseka ukuba ivunywa eKenya kwaye iprintwe. Abasemagunyeni beli lizwe baya kujonga olu xwebhu.
Iindwendwe kufuneka ziye eKenya kunye nepasipoti efanelekileyo esetyenziselwe isicelo se-visa se-Intanethi. Ipasipoti kufuneka ibe isemthethweni kangangesithuba seenyanga ezi-6. Iinkcukacha zencwadana yokundwendwela kufuneka zihambelane noxwebhu lwe-visa.
Iinkcukacha zaseKenya Visa
Yintoni iVisa yaseKenya?
Ukucwangcisa uhambo lokuya kwilizwe, njengeKenya kunokuba mnandi kwaye kumnandi. Kodwa ngalo mzuzu uyehla ukuba uhlengahlengise amaphepha anjengokufumana i-visa, inkqubo ende kunye nokudinwa iyakwazi ukuthoba imeko yakho. Nangona kunjalo, oku akunjalo.
Ukufumana i-visa akusekho busuku, apho kuye kufuneke uchithe ixesha lakho ume kwimigca emide kwindlu yozakuzo. Namhlanje, unokufumana i-visa ukusuka kwinduduzo yekhaya lakho. Oku kwenziwe ukuba kwenzeke liSebe laseKenya leNkonzo zoMfuduko. NgoSeptemba ngo-2015, bazise ngenkqubo ye-eVisa evumela abantu kwihlabathi liphela ukuba benze izicelo zevisa kwaye bazifumane kwi-Intanethi, ngaphandle kokutyelela i-Kenya diplomatic mission.
Ungasifaka kanjani isicelo se-Intanethi kwiVisa yaseKenya?
Unxibelelwano oluzinzileyo lwe-Intanethi kunye ne-smartphone okanye ilaptop yanele ukuba ufake isicelo se-visa yokuya e-Kenya. Kukho amanyathelo ama-3 alula ekufuneka uwalandele ukufaka isicelo se-visa ye-Kenya:
Dala i-akhawuntiInyathelo lokuqala kwinkqubo yokufumana i-eVisa yakho, ukudala iakhawunti. Kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi karhulumente kwaye wenze i-akhawunti. Ngale akhawunti, uya kuba nakho ukwenza yonke imbalelwano enxulumene ne-visa, wazi ngemeko yayo kwaye ufumane ivisa.
Faka isicelo seVisa kwaye ubhatale: Nje ukuba uyenze i-akhawunti yakho, uyacelwa ukuba ugcwalise iphetshana lesicelo. Gcwalisa lonke ulwazi ngokuchanekileyo nangokucacileyo. Emva kokuba ugqibile ukuzalisa le fom kufuneka ugcwalise amaxwebhu anje ngefoto yakho, ubungqina bendawo yokuhlala, iphepha lokugqibela lencwadana yakho yokundwendwela, iskena solwazi lwakho lwencwadana yakho yokundwendwela kunye nesiqinisekiso seenqwelomoya Emva koko, kuya kufuneka uhlawule umrhumo we-visa.
Khuphela i-eVisa yePDFEmva kokuba ifom yesicelo sakho isilungisiwe, uya kuyifumana i-eVisa yakho kwiakhawunti oyenzileyo. I-eVisa iya kuba kwifom yePDF, oya kuyidawuniloda ukuze uyikhuphe, ukuze uyazise kwabasemagunyeni, xa ufika eKenya.
Imiyalelo yabafakizicelo Ukufaka isicelo se-eVisa eKenya
Umntu ngamnye omdala uya kudinga incwadana yokundwendwela eyenzelwe ukutyelela eKenya. Abafakizicelo abangaphantsi kweminyaka eli-16 akufuneki bafake isicelo sevisa. Kuya kufuneka bangenise amaxwebhu abo afanelekileyo ezothutho kwindawo yokungena kwisikhululo seenqwelomoya.
Ngaphantsi kwazo naziphi na iimeko iindwendwe zivunyelwe ukuba ziqale ishishini okanye zisebenze ngokuhlawula, ngexesha lotyelelo lwazo kwilizwe.
Yintoni iVisa yabaKhenkethi yaseKenya?
Isebe laseKenya leenkonzo zokufudukela kwelinye ilizwe lasungula inkqubo ye-eVisa ngoSeptemba ngo-2015, evumela iindwendwe ukuba zenze izicelo kwaye zifumane ii-visa zabo kwi-Intanethi, ngaphandle kokutyelela i-Kenya diplomatic mission.
Yintoni esebenzayo ye-eVisa yaseKenya?
Yakuba ivunyiwe imvume, isebenza ixesha elithile leentsuku ezingama-90 ekungeneni kwayo. Ukwandisa indawo yokuhlala apha, abafaki-zicelo kufuneka benze isicelo kwakhona.
Ngawaphi amaxwebhu endiwadingayo, ukufaka isicelo se-eVisa yaseKenya?
Uya kucelwa ukuba ungenise la maxwebhu alandelayo ngesicelo sakho se-Visa-ikopi evavanyiweyo yephepha lokugqibela lokundwendwela, ifoto yomenzi-sicelo, ikopi eqinisekisiweyo yencwadana yokundwendwela, isiqinisekiso seenqwelomoya moya sokufika kunye namatikiti okubuya.
Ngaba kufuneka ndiveze naluphi uxwebhu, xa ndifika eKenya?
Ewe, ekufikeni eKenya, iindwendwe ziyacelwa ukuba zingenise la maxwebhu alandelayo- iVisa yaseKenya kunye nepasipoti.
Ngawaphi amaxwebhu ekufuneka ndiwanikezele njengobungqina bendawo yokuhlala?
Ukubonelela ngobungqina bendawo yokuhlala, abenzi-sicelo banokunikezela ngeenkcukacha zabo zokubhukisha kwihotele, indlu yeendwendwe okanye yendlu abakhethe ukuba bahlale kuyo.
Leliphi inani lamangenelo elivunyelwe ngumntu omnye wase-Kenya eVisa?
I-eVisa yaseKenya esemthethweni ivumela kuphela ungenelelo olunye. Oku kuthetha ukuba umenzi-sicelo unokundwendwela eKenya kube kanye, kunye ne-visa yabo.
Yeyiphi imeko ekufanele ukuba ipasipoti yam ihlangane ukuze ifake isicelo se-eVisa eKenya?
Ngaphambi kokuba ufake isicelo se-eVisa eKenya, qiniseka ukuba unencwadana yokundwendwela esemthethweni kangangexesha leenyanga ezi-6 okanye ngaphezulu.
Yeyiphi indlela eqhelekileyo yokuhlawula umrhumo we-eVisa waseKenya?
Unokukhetha nayiphi na indlela yokuhlawula kwi-Intanethi ukuhlawula umrhumo we-visa. Unokwenza intlawulo usebenzisa ikhadi letyala elisebenzayo okanye ikhadi lebhanki.
Ndiza kwazi njani ukuba isicelo sam se-visa samkelwe okanye saliwe?
Emva kokuba isicelo sigqityiwe, abafaki-zicelo baya kwaziswa nge-imeyile yabo, nokuba isicelo sabo se-visa samkelwe okanye saliwe.
Ndiza kuyifumana phi visa yam, nje ukuba isicelo sam samkelwe kwaye sigqityiwe?
Uyakufumana i-visa yakho kwi-ID yesazisi osichazayo ngelixa usenza isicelo se-Visa. Unokuzikhuphelela i-visa kwaye ufumane ukushicilelwa.